Ozizi A Na-ewu ewu
Otu ezubere iche
Debe oche gị
Otu Mmasị Pụrụ Iche
Otu mmasi bu otu ndi mmadu ndi nwere mmasi n’otu ihe ma ha na aru oru onu iji metuta atumatu oha na eze.
Anyị bụ otu ndị ọkachamara na IT nwere oke agụụ iji tinye nkà na onyinye anyị maka ijere Chineke na mmadụ ozi site na ndọtị
Ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na mpaghara ndị a; IT, Telecoms, Ndị mmepe sọftụwia, Eletriki / Elektrọnik wdg.
A na-akpọ gị isonyere IT / Telecom SIG.
Ndị ọkachamara nọ na TOD sitere na ụlọ ọrụ ihe ọmụma Nkwukọrịta Ozi jikọtara ọnụ site n'okwukwe nkịtị na-arụ ọrụ na-adịru ebighị ebi
Nke a bụ ngwa ọpụpụ ezubere maka iru ndị ọkachamara n’enweghi churched ma ọ bụ de-churched.
Anyị na-ezukọ otu ugboro n'ọnwa
Nke a dị iche na obere ụlọ ụka gị nke na-ezukọ maka ọmụmụ Bible n’izu ahụ. Nke a bụ ngwa ọpụpụ
Anyị akọwapụtala ọhụụ anyị iji nye ndị otu ụka ụka n'eleghị anya n'iwu gbasara ihe gbasara achụmnta ego, ikike obodo, mmekọrịta obibi, uche, nkwekọrịta na akwụkwọ iji belata esemokwu na obere ụlọ ọgwụ iwu anyị na-eme mgbe elekere 10.00am ọ bụla Nke abụọ Ofbọchị nke ọnwa ahọpụtara.
Ọhụụ anyị gụnyere nzukọ ọmụmụ ihe mgbe niile na ọganihu nke ịga n'ihu na agụmakwụkwọ iwu na mgbanwe nke mmepe iwu na ịkwalite ọrụ anyị. Anyị nwere nzukọ WhatsApp ugbu a. Anyị na-etinye ndụmọdụ dịka ndị ọka iwu Christian na ọbụbụenyi na ụka.
Ebumnuche na ebumnuche bụ ịghọ ezigbo ọka iwu Ndị Kraịst n'omume na omume ma mejupụta ebumnuche Chineke na ndụ anyị dị ka ezigbo ndị ọka iwu na ahụ Kraịst.
Iji jikọta ndị otu ụlọ ọrụ mmanụ na Gas ụlọ ọrụ ọnụ, kwalite ntụkwasị obi nke ịmekọrịta azụmahịa na ibe ha, hazie ọzụzụ ike, usoro ịmekọrịta ụzọ abụọ na ndị otu ahụmịhe, ịkparịta ụka n’etiti ndị otu na ọrụ okike n’etiti ndị otu ”.
Ike na ikike ụlọ nke ndị otu.
Iji kwado TOD (Churchka) na mpaghara mkpa.
Iji kwalite ntụkwasị obi nke ịzụ ahịa n'etiti ndị otu.
Iji gbaa IZIRingTA na njikọta n'etiti ndị otu.
Job na ihe okike bara ụba maka ndị otu site na mmemme mmemme na nkuzi.
Onyeka Onwenu Matthew Ajakaiye- omotayo.ajakaiye@gmail.com
Iji mee ka RCCG TOD buru ibu iji nabata ndị ọrụ nchekwa ma pere mpe iji ruo ha.
Fozụlite mmekọrịta ọkachamara na RCCG TOD site na ịnye ohere maka ndị ọrụ nchekwa n'ime ndị agha, Paramilitary na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ jikọrọ ọnụ iji kerịta, kesaa ihe onwunwe, zụlite onwe ha ma tinye nka ha maka nchekwa nke ofka.
Nkwupụta Ozi (3 John 2)
Iji kwalite ọdịmma anụ ahụ, nke uche, nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana nke mmụọ nke onye ọ bụla nọ na TOD iji mezuo nke ya
akara aka ya na Chineke
Iji kwalite mkpakọrịta n'etiti otu
Iji kwado ụka n'ihe metụtara ahụike CSR dịka ahụike na-apụ n'oge a na-agbasa ozi ọma
mmemme n'ime na n'èzí ụka, ọrụ metụtara ahụike n'ime obodo wdg.
Iji nye ndị otu nkwado nkwado na ndị otu na mpaghara ọganiihu n'ọrụ
Ndị na-ege ntị n’ozizi
Ndi otu ndi otu ndi ogwu ahuru anya diri ndi aru ike
Ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị ọkà mmụta ọgwụ, ndị sayensị laboratory na ndị ọrụ para-medics ndị ọzọ na ụka
Dr. Oriakụ Peju Adenusi- pejunusi@yahoo.com
Anyi bu ndi otu ndi okacha mmuta nwere mmasi banyere ozuzu umu Chukwu na umuaka nke uwa niile site n’inwe mmuta na amamịghe di iche-iche ebe anyi na ndi mmadu na ndi ozo n’ekweko.
Ebumnuche anyị bụ ịgba mbọ hụ na onye nkuzi ọ bụla nọ na TOD kacha mma na mpaghara ha ahọpụtara, ma nwee ohere ịbanye n’elu ikpo okwu ebe ha ga-ekwupụta echiche ha na nchegbu ha nke ọma site na mkpakọrịta, ọzụzụ na nzukọ ọmụmụ nke ga-eme anyị nna ukwu na gburugburu ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyi.
Atụmatụ anyị maka afọ a gụnyere, ma ọ bụghị nanị na-eso ya:
Iji hazie ọzụzụ kwa ọnwa na kwa ọnwa na kwa izu na mpaghara. Ndị otu ọ bụla ma ọ bụ ndị ndụmọdụ ndụmọdụ agụmakwụkwọ afọ ofufo ga-ahụ maka ọzụzụ na nzukọ a.
Anyị bu n’obi ịnwe ndị nkuzi nke isiokwu / ọkwa agụmakwụkwọ dị iche iche; ndị na-ahụ maka agụmakwụkwọ na ndị nhazi; ndị nwe ụlọ akwụkwọ na ndị niile nwere mmụọ na-emetụta oke ụkpụrụ na ịzụlite ụmụ akwụkwọ ụwa.
Dcns. Juliet Ugwu- nekymountain@yahoo.com
Anyị ga-enwe otu ndị nwere njikọ chiri anya nke ga-ejikọ ọnụ ọnụ nke na-adabere n'okwu Chineke.
Anyị ga-eduzi ọzụzụ metụtara ọrụ iji kwalite nka anyị.
Anyị ga-enye ndị otu anyị ihe ịkparịta ụka n'andntanet na nduzi.
Anyị ga-azụlite ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-asọpụrụ Chineke n’ebe ọrụ.
ọrụ na mmepe ndu maka ndị otu anyị
mmeri mkpụrụ obi nye Kraịst
Uto nke onwe site n’inye ndụmọdụ
Educationga n'ihu agụmakwụkwọ site n'inye ọzụzụ
Ọbụbụenyi na ịkparịta ụka n'Networkntanet
Ije ozi na ụka anyị na obodo anyị
Ndị òtù ezubere iche:
Ọ dịkarịa ala 70% nke ndị otu ụka na-arụ ọrụ na Banking, Insurance ma ọ bụ ego
Ndị ezumike nká sitere na ngalaba ndị a
Fọdụ n'ime ọrụ anyị gụnyere
mkparịta ụka mgbe niile na ndị otu egwuregwu na ntanetị anyị
ị na-enwekarị nchekasị na nrụgide site na ọrụ dị mkpa nke ọrụ 24/7
Ọmụmụ ihe na nzukọ ọmụmụ ihe
Oge ikpe ekpere
ọpụpụ ọdịmma nke ụmụ mgbei, wdg
Ememe ekeresimesi ezinụlọ.
Oriakụ Yemisi Edun- toedun@yahoo.com
Ebumnuche nke otu a bụ inwe opekata mpe ndị otu 250 na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-esonye n'ụzọ dị irè n'otu ma ọ bụ karịa nke agbụ ọrụ ugbo ma ọ bụ agro. Iji nọgide na-abụ onye otu, onye ọ bụla kwesịrị itinye aka na onye ọ bụla ma ọ bụ karịa:
1. kọ ugbo. 2. Ngwakọta ngwakọta & nchekwa. 3. Nhazi na ma ọ bụ mmepụta. 4. Nkwakọ ngwaahịa na nkesa. 5. N'ogbe na njem.
6. Ahịa na ma ọ bụ na-ere ahịa. 7. Ulo oru.
Ọhụụ ọhụụ otu a bụ: "Iji nyere ndị otu ụka aka ịtọlite ​​ebumnuche metụtara agro-jikọtara ọnụ nke ga-adigide"
Mission & Mgbaru Ọsọ
Ya ozi bụ
- Inwe ofufe na ifekọ Chineke ọnụ.
- Iji nyere ndị otu aka aka ịbanye n'ọtụtụ ọrụ ọrụ ugbo.
- imatemechi ndi otu ala bara ụba bara ụba, inye ego, itinye ego na ulo oru ndi ozo metụtara ya.
- Mee ka ndị mmadụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịkụziri ndị na-enye ha ikike site na ọzụzụ, nkuzi, njem na enyemaka.
- Gbaa ndị otu ume ka ha nwee atụmatụ azụmaahịa a na-akwụ ụgwọ ego ma kpebisie ike na-aga nke ọma otu a.
Mbipụta, Ad & Mbipụta
Mee ka ndị ahịa gị mara ihe na-emenụ. Iji mee ọdịnaya a nke gị, gbakwunye ihe onyonyo gị, ederede na njikọ gị, ma ọ bụ jikọọ na data sitere na mkpokọta gị.
Mercy T. Apresai- apresaimercy@gmail.com
Ndị otu ekike maka ya bụ ndị na-esi nri, ndị isi nri, ndị na-eme achịcha, MC, ndị na-eme mmemme, ndị na-achọ mma, ndị na-ese foto na ndị nọ na ụlọ ọrụ nkwari akụ wdg.
Ebumnuche nke Ihe Omume na Mmasị Ihe Mmasị Pụrụ Iche bụ iso ndị otu na-emekọrịta ihe (otu) dị ka uche na-azụ ahịa n'ụzọ nke Chineke yana iji gosipụta ịhụnanya ebumnuche nke ozi Jizọs Kraịst n'ụwa. Ọzọkwa inye ahụkebe mmụta na mbepụ technology mara otú.
Ọhụụ nke otu ahụ dịka nna anyị tụpụtara n'ime Onyenwe anyị bụ ka ndị otu ahụ wee hụ ìhè ma kwenyekwa na e nwere ezigbo ndị nwoke na ndị nwanyị na-azụ ahịa n'ụzọ nke Chineke na ụzọ Kraịst. Yabụ ọhụụ a bụ ileba anya n’ọdịnihu wee hụ otu ọgbakọ Ndị Kraịst na-eme nke ọma na azụmaahịa ma n’ụzọ dị iche iche si wee gbasaa ozioma nke Jizọs Kraịst. Ọzọkwa amị elu mma Christian ọkachamara.
Ebumnuche anyị dị ka otu bụ imekọrịta ma ọ bụ ịkpakọrịta n'etiti ndị otu anyị na obere cell yana kwa n'ụzọ Chineke si azụ ahịa, yabụ anyị na-esonye n'ịzụ ndị otu na ndị otu ụka ma nye ha ikike ime ka ndụ mara mma.
Oriakụ Yinka Samba Ishiegbu- wokosamba@gmail.com
Ọbịa na saịtị
2020 © RCCG ernlọikwuu nke David.
Kwadoro site na Fixitcom Teknụzụ